မန္တလေးက တောင်းရမ်းစားသောက်သူ အများစုရဲ့ တကယ့်ဘဝအမှန် - Zet Star
November 24, 2020 ZCC News	0 Comments
ပိုက်ဆံလိုက်တောင်းနေတဲ့ သူတောင်းစားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်တွေကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးကို မျှဝေချင်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁နှစ်ကျော်လောက်က မန္တလေးမြို့အတွင်းမှာ လိုက်လံတောင်းစားနေတဲ့ ကလေးလူကြီးတော်တော်များများကို တွေ့ဆုံပြီး..သူတို့အတွက်အလုပ်ရရှိရေး..စားဝတ်နေမှု၊ အဆင်ပြေရေး..တို့အတွက် ဂျေဂျေ.နဲ့. ဂျေဂျေ.ရဲ့ ဆရာတွေ စုပေါင်းပြီး. သူတောင်းစား တော်တော်များများနဲ့ ..တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီတွေ့ဆုံမှုမှာ ညဈေးတန်းမှာ တောင်းစားနေသူများ၊ မိန်းထဲမှာ တောင်းစားနေသူများ၊ ရတနာပုံဈေး အနီးတဝိုက် တောင်းစားနေသူများ၊ ဘုရားကြီးအနီး ပတ်ဝန်းကျင်တောင်းစားနေသူများနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ သူတို့အားလုံး ရိုးရိုးသားသား လုပ်ကိုင်စားသောက်နိုင်ဖို့ အတွက်ပါ။ ဒါကြောင့် သူတို့တွေနဲ့ အဆင်ပြေနိုင်မယ့် အလုပ် နေရာတော်တော်များများကိုလည်း အစကတည်းက ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ တော်ကြာ.အလုပ်နေရာ..မရှိလို့ မလုပ်ချင်ဘူးလို့ ပြောမှာ စိုးလို့ပါ။
အဆုံးသတ်ကတော့ မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ တောင်းစားသူများကို လေ့လာလိုက်တဲ့အချိန်မှာ တောင်းစားသူ အများစု မှာ မိသားစုလိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ် မရှိလို့တောင်းစားတဲ့လူတွေလည်း မရှိဘူးမဟုတ်ပါဘူး ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရမ်းနည်းလွန်းပါတယ်။
ဂျေဂျေတို့တွေ့ဆုံပြီး မေးမြန်းတဲ့.မိသားစု.တစ်စုဆိုရင် သူတို့..တစ်အိမ်လုံးရဲ့ တစ်ရက် ဝင်ငွေဟာ.အနည်းဆုံး ၄၀၀၀၀ ကျပ် အထက်မှာ ရှိနေပာတယ်တဲ့။ မိသားစု.၅ယောက်ပါ..မိဘ နှစ်ပါးနဲ့.သားသမီး.၃ယောက်ပါ။ မိခင်နှင့် ကလေး အငယ်ဆုံးလေးဟာ မိန်းထဲမှာ တောင်းတာပါ။ ကျန်တဲ့မိသားစုဝင် တွေကတော့ ညဈေးတန်း ရတနာပုံဈေး စတဲ့ လူစည်ကားတဲ့နေရာတွေမှာ တောင်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မိန်းထဲမှာဆို မိခင်က တစ်နေရာမှာ ထိုင်နေပြီး ကလေးလေးကို လိုက်တောင်းခိုင်းတာပါ ညနေခင်းလေး တောင်းလိုက်တာနဲ့ နှစ်သောင်းနီးပါး ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကလေးငယ် နှစ်ယောက်က ကျောင်းနေအရွယ်ရောက်နေပေမယ့် ကျောင်း မနေရပါဘူး တောင်းတာ.. ပိုက်ဆံရတယ်လို့ ကျောင်းလုံးဝ မထားဘူးလို့.သူ့မိခင် ကိုယ်တိုင်က.ပြောပါတယ် နောက်ပြီးထပ်ပြောပါသေးတယ်။
ရတနာပုံဈေး အနီးနားမှာ တောင်းရမ်းနေတဲ့.သူ့.သားအကြီးဆုံးရဲ့ .တစ်ရက်တောင်းရငွေဟာ..၂၀၀၀၀လောက်ရတယ်ပြောပါတယ်။ တကယ်လို့ ဂျေဂျေတို့ရှာပေးတဲ့အလုပ်က တစ်လ ၆သိန်းလောက်ရမယ်ဆိုရင် သူ့ကလေးကို သူတောင်းစားမလုပ်ခိုင်းတော့ဘူးတဲ့။
အဲဒီမိသားစုဟာ မြို့သစ်မှာ.အိမ်ပိုင်ဝိုင်းပိုင်ရှိပေမယ့်.အဲဒီ အိမ်ကိုတော့ အဌားချထားပြီး.ကျုးထဲမှာ တဲထိုးနေတယ်လို့ လည်း ပြောဆိုပါတယ်။ ကျူးဖြစ်နေပေမယ့် ဆိုင်ကယ် ၃ စီးရှိပြီး တစ်ယောက်ကို ဖုန်းတစ်လုံးဆီလည်း..ရှိပါတယ်။ နေ့ပြန်အတိုးတွေလည်း ပေးထားတယ်လ်ု့ ဆိုပါတယ်။ ဒါတကယ့်အစစ်အမှန်ပါ။
ဂျေဂျေတို့ ဆရာတွေက အငယ်ဆုံးကလေး နှစ်ယောက်ကို ကျောင်းထားဖို့ တောင်းဆိုတဲ့ အခါမှာ လုံးဝ ခါးသီးစွာ ငြင်းဆန်ပါတယ်။ ပြောလို့ လုံးဝ မရခဲ့ပါဘူး။ နောက်ထပ် .ကလေးတွေရယ် အဘိုးကြီးအဘွားကြီး တွေကို ဌားရမ်းတဲ့ ဈေးကွက်လည်း ရှိသေးတယ် လို့ပြောဆိုပါတယ်။ တစ်ခြား တောင်းစားနေတဲ့..လူတွေ.ကိုလည်း လိုက်လံပြောဆိုတဲ့ အချိန်မှာလည်း မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။
ဂျေဂျေတို့ အားသွန်ခွန်စိုက်ပြီး.ကြိုးစားပေမယ့် ဒီပြသနာကို မဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁နှစ်ကျော်လောက်က..စပြီး အဲဒီ သူတောင်းစားများကို လုံးဝ မလှူတော့ပါဘူး။ အဖိုးအဖွားအသက်အရွယ်နဲ့.ခြေလက်မကောင်းတဲ့ လူတွေ ဆိုရင်တော့ လှူပါတယ်။
ဘာကြောင့် မလှူသလဲဆိုတော့.သူတို့အတွက်ပါပဲ။ ဒီလိုသာ ဆက်ပြီး ကျွန်မတို့ လှူနေမယ်ဆိုရင်..သူတို့ဘဝတွေဟာ ဆက်လက်ပြီး နိမ့်ကျနေမှာပါ။ မျိုးရိုးစဉ်ဆက် နိမ့်ကျသွားမှာပါ။ သူတို့မွေးဖွားလာမယ့် အနာဂတ် ကလေးငယ်လေးတွေ ဟာလည်း ပညာသင်ယူခွင့် ရရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့..ထင်မြင်မိပါတယ်။
ပညာရဲ့ တန်ဖိုးကို.နားမလည်တဲ့..ကလေးလေးတွေ ဖြစ်သွားရင် သူတို့ဘဝဟာ လှနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိတော့ဘူး လို့လည်း ထင်မြင်မိပါတယ်။ ပိုက်ဆံကို လွယ်လွယ်လေးနဲ့ ရနေကြတော့ ရေသာခို အချောင်စားနေတဲ့..ဘဝကနေလည်း ရုန်းထွက် နိုင်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရုန်းထွက်ချင်မှာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်.အဆိပ်ပင်ကို..ရေမလောင်းတော့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အပေါ်က အချက်တွေအပြင် အခု လက်ရှိအချိန်မှာ တောင်းရမ်းစားသောက်သူတွေနဲ့ ကော်ရှုတဲ့ ကလေးတွေမှာ ကိုဗစ်ရောဂါပိုး ပျံ့နှံ့နေနိုင်တဲ့ အတွက် သူတို့ကို ပိုက်ဆံ ပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်း မပြုလုပ်ကြဖို့ မန္တလေးတိုင်း စည်ပင်က ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
← နီဗာ ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းရဲ့ နောက်ဆုံးရ အခြေအနေ (မိုးလေဝသ ဆရာမလေး စုစုစံ)
ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်မှာ ပါဝင်လိုကြောင်း ဂျပန်ရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုကို မြန်မာ လက်ခံပြီ →